15 sanno jir Mohammad Rezaei: waxaan tebey waalidkey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
15 sanno jir Mohammad Rezaei: waxaan tebey waalidkey
La daabacay måndag 28 november 2016 kl 07.00
Mohammad Razeai: waalid la'aan waa culays
15 jir Mohammad Rezaie labo sanno ka hor ayuu Sweden yimid.
15 jir Mohammad Rezaei labo sanno ka hor ayuu keligii ka yimid dalka Afghanistan iskana dhiibay Sweden.
Waqti kadib nasiib waxa uu u yeeshay in uu helo magangeliyo gelin iyo sharci degenaansho.
Waxa uu hadda ku nool yahay guri loogu talo-gal dhalaanka waddanka kelinimada ku yimaada magaalo la yiraahdo Motala bartamaha konfureed ee Sweden.
- Waxaan dareemayaan culus weyn oo dusha iga saaran waalidkey la’aantiis, ayuu yeri. Mar kasta oo arddeyda iskuulka aan isla dhigano waalidooda iskulka ugu yimaadaan waxay i xasuusaa waalidkey in aysan ila joogin oo keligay waddanka ku ahay, tas oo qalbiga iga xanuujisa, ayuu yeri.
Dhibaato iyo culus ayey ku tahay Mohamed Reazi in keligiis ku noolaada Sweden waalidkiisana kala maqnaadaan.
- Wax kasta waa in aad qabsatid. Cuntada karinta, nadaafadda iyo adeegaba. Waa igu badan tahay howlas in aan wado qabto. Waqtigii aan waxbaran lahaa ayey i dhaafisaa, ayuu yeri.
Marka Mohamed uusan ku maqneyn iskuulka ama ku mashquulsanweyn howlaha guriga waxuu ka helaa in isku maaweeliyo ciyaaraha iyo jimicsiga.
- Aad ayaan uga helaa kickboxning, ayuu yeri, todobadkii labo mar ayaa ciyaaraha kubadda cagta, afar illaa shan goorna halkaan ayaan imaada si aan u sameeyo kickboxning. Labo goor todbaadkii waxaan sidoo kale aad barkadda dabaasha. Markaan Sweden maba aqoonin sida loo dabaasho balse halkan ayaan ku baranay, ayuu yeri.
Mohamed aad uu ugu faraxsan yaay ugu mahad naqayaa fursadda uu Sweden ka helay in uu sameeyo ciyaaraha jimicsiga uu ka helo. Nolashii uu Afghnistan iyo Ciiran uu ayaan ku nool aad ayey uga duwaneyd midda uu Sweden ku heysto.
- Afghanistan loda ayaa raaci jiray, markan Iran u soo guurnay waxan ka shaqeyn jiray beer oo qudaarta ka guri jiray. Sidoo kalena waxaan ka soo shaqeeyey dhismayaasha, ayuu yeri.
- Markan Iraan deganaa waxaan aaminsanaa in nolasheyda oo dhan ku dhameysanayo xamaali, waxay aheyd shaqo dhib badan mana jirin fursad aan u heystay wax kale oo aan qabto. Halkan laakiin waxaa jira fursado kala duwan, wax ayaan baran karaa, ayuu yeri, aad ayaan taa uga mahad celinayaa.
Balse dhanka kale halkan caqabo way ka jiraan, sida in aad cuntaada karsatid, nadiifisid dharkaaga iyo alaabtana dhaqdid soona adeegatid. Mararka qaar dhibaato ayey ugu noqotaa middas.
- Mararka qaar waxaa iskaga tagaa markii howlaha guriga ugu bataan, ayu yeri
Guriga uu degan yahay waxaa jira shaqaale ka howl-gala, balse saddex sanno kadib marka uu 18 sanno u buuxsanto waa in uu halkan ka guuro. Taasna waa midda keliyo ee uu hubo mastqabalka in ay dhaci doonto, ayuu yeri.
- Mustaqbalka, ma sahal ay tahay in wax laga sheego. Dabcan waxaan doonayaa in aan sii wato waxbarashada in ay ii suuro-gal tahay, ayuu yeri.